DEG DEG: Kevin De Bruyne oo Seegaya kulanka Manchester Derby…(Imise ayuu Garoomada ka maqnaanayaa?) – Gool FM
DEG DEG: Kevin De Bruyne oo Seegaya kulanka Manchester Derby…(Imise ayuu Garoomada ka maqnaanayaa?)
Byare November 2, 2018
(Manchester) 02 Nof 2018. Kevin De Bruyne ayaa seegi doona kulanka Mancheser Derby ay United iyo City isku wajihi doonaan 11-ka bisha November kaddib dhaawac ka soo gaaray kulankii xalay ay Man City ka adkaatay Fulham.
Laacibka reer Belgium ayaa dhawaan uun ka soo kacay dhaawac jilibka lugta midig uu garoomada uga maqnaa muddo lix usbuuc ah iminkana waxaa lagu wadaa inuu Bil kale garoomada uga maqnaado dhaawaca cusub.
Marka laga soo tago kulanka Derby Manchester, De Bruyne ayaa sidoo kale seegi doona kulamada Southampton iyo West Ham iyo waliba kulanka Champions League ay Manchester CIty ku wajihi doonto Shakhtar Donetsk.
Sidoo kale lama hubo haddii uu laacibka ka soo muuqan doono kulamada Lyon iyo Bournemouth ee dhici doona dhamamadka bisha November.
SAWIRRO: 20-Tababarayaal oo Shaqo doon ah...(Wenger, Conte, Van Gaal iyo qaar kaloo badan)....Yaa loo dhiibi doonaa xilka Real Madrid???
DEG DEG: Labo Xiddig oo Muhiim ah oo ka maqnaanaya Liverpool kulanka Berito ee Arsenal